Ọganihu nyocha nke mkpuchi maka nkedo ductile iron epc | Yingyi
Ọganihu nyocha nke mkpuchi maka nkedo ductile iron epc
Ihe nkedo Nodular, dị ka ụdị ihe nkedo ígwè dị elu nke nwere ihe dị nso na ígwè, nwere uru nke ọnụ ahịa nrụpụta dị ala, ezigbo ductility, ike ike ọgwụgwụ dị mma na nguzogide eyi, yana ezigbo ihe eji arụ ọrụ. A na-eji ya eme ihe na akwa igwe, valvụ, crankshaft, piston, cylinder na akụkụ ndị ọzọ nke injin ụgbọ ala. Nkedo ebu efu teknụzụ bụ ụdị teknụzụ na-enweghị nkewa elu, A na-eji usoro nhazi ụgbụ dị nso nke nkedo dị mgbagwoju anya na-enweghị ájá na-emepụta ihe nkedo ígwè, ihe nkedo, aluminum alloy na magnesium alloy akụkụ. Ígwè ductile mode furu efu, mere nke N'ihi ọdịnaya carbon ya dị elu, mgbasawanye graphitization na njirimara ndị ọzọ n'oge siri ike, nkedo n'elu wrinkling, shrinkage cavity na porosity, carbon black na ndị ọzọ ntụpọ na-emekarị site na-adịghị mma mkpuchi arụmọrụ. N'ihi ya, Ịkwalite njirimara mkpuchi nke epc bụ njikọ dị mkpa iji hụ na mmepụta nkedo.
Na mmepụta epc, àgwà mkpuchi dị oke mkpa maka ịdị mma nkedo. Epc mkpuchi kwesịrị inwe ezigbo permeability, ike, sintering na peeling Njirimara Dị ka arụmọrụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme nyocha n'ozuzu na njirimara na-arụ ọrụ nke mkpuchi, usoro mmekọrịta dị n'etiti mkpuchi na ngwaahịa ire ere EPS, mmetụta nke mkpuchi na ịdị mma nkedo na mkpuchi ihe mejupụtara elu. Nnyocha, na nkwalite ihe mejupụtara mkpuchi, oke mgbakwunye nke arụmọrụ mkpuchi, usoro nkwadebe mkpuchi. Site na mmepụta na iji mkpuchi epc, mmepụta nke mkpuchi kwesịrị ịhazi Usoro nkwadebe, ihe nkedo dị elu; The furu efu ebu nkedo mkpuchi ahịa bụ chaotic, mkpuchi usoro bụ mgbagwoju na oké ọnụ, na nkwadebe usoro bụ cumbersome, na ọbụna usoro mejupụtara na-ezighị ezi. Ọ bụghị naanị na ọ na-emetụta mkpụrụ nke nkedo epc, kamakwa ọ na-egbochi mmepe nke teknụzụ EPC na ụlọ ọrụ mkpuchi.
1 mkpuchi mkpuchi nke ígwè ductile na nkedo epc
Okpomọkụ nkedo nke igwe nodular na-abụkarị 1380 ~ 1480 ℃, dị ntakịrị ala karịa nke nkedo ígwè. Njupụta nke ígwè nkedo nodular bụ 7.3g/cm3, dị elu karịa nke magnesium na aluminom alloy, ya mere mmiri mmiri nkedo nodular. Mmetụta nke okpomọkụ na ike na mkpuchi n'oge ndochi dị ịrịba ama karịa nke magnesium na aluminum alloy. N'ime usoro ductile iron nke epc, mkpuchi na-arụ ọrụ n'ihi usoro nrụgide na-adịghị mma N'okpuru steeti ahụ, n'otu aka ahụ, akụkụ dị n'ime nke mkpuchi ahụ kwesịrị iguzogide nrụgide siri ike na nrụgide static nke elu okpomọkụ ductile ígwè mmiri mmiri, na n'ime na elu nrụgide dị iche iche nke mkpuchi bụ nnukwu, na mkpuchi dị mfe. mgbe ike okpomọkụ ezughị oke Na-akpata nkedo elu sag ma ọ bụ ọbụna nrụrụ nkedo. A na-eji igwe nkedo nodular mara oke okpomọkụ na ire ere ngwa ngwa nke EPS. Ngwaahịa gas na-akpata ọtụtụ ngwaahịa ire ere, gụnyere obere mmiri mmiri Ngwaahịa steeti na ihe siri ike. A na-emepụta ngwaahịa na-emebi emebi n'ọtụtụ buru ibu ma jupụta oghere mkpuchi dum, iji zere ọdịda nke ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe mkpuchi ahụ, na-ebute pores ígwè na wrinkles ductile. Mkpuchi kwesịrị inwe ezigbo ikuku ikuku maka ihe omume nke ntụpọ dị ka akpụkpọ ahụ na ntinye carbon. Ekwesịrị ịchịkwa ndenye arụmọrụ mkpuchi n'ime oke ezi uche na-emetụta ike na permeability nke mkpuchi. The refractoriness, sinter onwunwe, mkpokọta udi na urughuru size nwere kpọmkwem mmetụta na ike na permeability nke epc mkpuchi. N'ime usoro nkwadebe mkpuchi, ọkpụkpụ na-eguzogide ọkụ Nhọrọ ihe dị mkpa karịsịa.
2 Nhazi na usoro mkpuchi mkpuchi ductile maka epc
Mkpokọta refractory bụ isi ihe nke mkpuchi. Arụmọrụ nke mkpuchi nwere njikọ chiri anya na ihe anụ ahụ na kemịkalụ nke mkpokọta refractory. Ojiji nke nkwusioru na-egbochi nchịkọta refractory na agba Sedimentation, nke mere na mkpuchi ahụ nwere ezigbo thixotropy. N'oge usoro ntinye mmiri, mkpuchi ahụ kwesịrị inwe mmetụta dị ike na-ekpo ọkụ, na iji ihe eji eme ihe dị iche iche na-eme ka nkwadebe mkpuchi. Ihe mkpuchi ahụ nwere ikike ịnọgide na-enwe ike n'elu oke okpomọkụ. Mkpuchi site na akụrụngwa iji guzobe mkpuchi iji kwadebe, mkpuchi na ihicha usoro isi atọ. Akwa mkpuchi mkpuchi Ihe na mgbakwunye na arụmọrụ dị mma, ọrụ nkà na ụzụ ya dịkwa oke mkpa, nkwadebe mkpuchi, usoro usoro mkpuchi kwesịrị ịdị mfe, ọrụ dị mma, mkpuchi elu dị larịị, enweghị pinhole, mgbape na ihe ndị ọzọ.
3 mkpuchi mkpuchi nke ductile ígwè epc nkedo
3.1 ike mkpuchi
Dị ka mkpuchi mkpuchi refractory n'elu ọdịdị ahụ, mkpuchi ọnọdụ na-apụ n'anya na ike dị elu nwere ike ọ bụghị naanị imeziwanye ike na isi ike nke ọdịdị ahụ, kamakwa enwere ike iji ya mee ihe dị ka mmiri mmiri metal na ebu. Ihe mgbochi dị irè n'etiti ájá ahụ na-eme ka mkpuchi ahụ nwee ike iguzogide nrụgide siri ike na nke static na nrụgide mgbasa ozi mpụga nke usoro ndochi igwe dị elu nke metal dị elu na-ebute, ma na-ebelata ájá ájá na-arapara nke nkedo ahụ. Ya mere, ike mkpuchi bụ ihe dị mkpa index iji tụọ arụmọrụ nke mkpuchi.
3.2 Ọmụmụ na porosity na permeability nke mkpuchi
Mgbasa ọla a wụrụ awụ, ọdịdị EPS n'okpuru omume nke okpomọkụ dị elu ngwa ngwa ire ere gas, na mmiri igwe dị n'ihu, ngwaahịa ire ere site na oghere site na mkpuchi mkpuchi, mmiri mmiri igwe. Mwepu nke ndochi ebu na ngwaahịa ire ere dị na nha nhata siri ike. Ọ bụrụ na ikuku ikuku nke mkpuchi ahụ dị oke ala, ngwaahịa ndị na-emebi emebi enweghị ike ịpụpụ n'ime oghere n'oge, nke ga-eduga na pores na carbon deposition ntụpọ n'okpuru akpụkpọ nke nkedo. Were gabazie. Ọ bụrụ na ikuku ikuku nke mkpuchi ahụ dị oke elu, ngwa ngwa ndochi ebu dị ngwa ngwa, dị mfe ime ka ájá na-arapara n'ibu. Site na mmụba nke mkpuchi mkpuchi, mmetụta nke njupụta mkpuchi na ikuku ikuku ga-eji nwayọọ nwayọọ belata. Permeability dị elu The mkpuchi nwere ibu nkezi urughuru dayameta na wider urughuru size nkesa.
4 Mmetụta nke mkpuchi na ntụpọ nke nodular nkedo ígwè
4.1 Mmetụta nke mkpuchi na nkedo n'elu wrinkling ntụpọ
Na nkedo ọnọdụ furu efu, mgbe ọdịdị EPS na-ezute usoro nbibi nke mmiri mmiri igwe dị elu, ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na-emepụta mmiri na-ese n'elu mmiri mmiri ma ọ bụ rapara na mkpuchi ahụ, nke siri ike ịpụ kpamkpam. Mgbe metal Mgbe mmiri mmiri ahụ dị jụụ ma sie ike, esemokwu elu nke ihe fọdụrụ na-emebi emebi dị iche na nke ígwè mmiri mmiri. Ka ihe nkedo ahụ na-adalata, a na-etolite mpịaji wavy ma ọ bụ nke na-adịghị mma na akpụkpọ nkedo.
4.2 Mmetụta nke mkpuchi na nkedo ntụpọ carbon
A na-akpata nrụrụ nke ikuku carbon site na nnukwu carbon a na-emepụta na-eme ka ọ dị n'elu ihe mkpuchi ahụ, nke a na-apụghị ịpụ na oghere ma na-arapara n'elu nkedo ahụ. A na-egosipụtakarị ya na nkedo dị ka ihe nkiri carbon na elu na-egbuke egbuke. Ihe nkedo nke nkedo jupụtara na carbon ojii, wdg. Na mmepụta epc, ntụpọ nkedo nwere njikọ chiri anya na ihe ọdịdị ọdịdị, ihe nkedo, mkpuchi na usoro nkedo.
5 Ntuziaka nyocha nke mkpuchi maka nkedo ductile iron epc
Igwe ihe nkedo nodular tụfuru ihe nkedo ebu, n'ihi oke ọkụ na-awụsa ya, ọdịdị ụfụfụ buru ibu ọgbọ gas, nkedo na-adịghị mma. A na-edobe ihe mkpuchi nke ígwè nkedo nodular na ígwè a wụrụ awụ n'oge ndochi ebu Mmetụta scour siri ike na ọdịiche dị n'ime na nke dị n'èzí, mkpuchi ahụ ga-enwerịrị ike dị mma na okpomọkụ dị elu, iji gbochie usoro mmiri mmiri nke ígwè kpatara mmebi nke mkpuchi ma na-emetụta tebụl nkedo. Ọdịdị dị elu, ya mere ihe mejupụtara na ihe onwunwe nke nchịkọta refractory na mmetụta nke mgbakwunye na ike nke mkpuchi na-aghọ isi ihe na-eme ka arụmọrụ nke mkpuchi dịkwuo mma.
Oge nzipu: Nov-05-2021
© Copyright - 2010-2019 : Ikike niile echekwabara.